Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aan farxad galiyay shacabka Muqdisho - Caasimada Online
Home Nolosha Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday go’aan farxad galiyay shacabka Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday go’aan farxad galiyay shacabka Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa ku dhaawaqay go’aan farxad galiyay shacabka Muqdisho, waxaana uu sheegay in wasaaraddiisu ay wato qorshe wax looga bedalayo ammaanka Muqdisho.
Wasiir Ducaale ayaa tilmaamay in la yareyn doono xirnaashaha waddooyinka Caasimadda, islamarkaana ay dowladdu furi doonto inta badan jidadka xiran oo muddooyinkii la soo dhaafay dadweynuhu ay dhibaato ku qabeen.
Sidoo kale wasiirka ayaa intaasi raaciyay in dowladda federaalka ay la imaan doonto qalab casri ah oo lagu xaqiijinayo amniga dalka.
“Waxaan ballan-qaadayaa Jidadka inaan qafiifin doonno,Meelaha xiran waa Jid Caddayaasha oo kaliya jid cadde kastana Askari lama geynkaro Marka qalab Casri ah ayaana keeneynaa oo Amniga lagu xaqiijinayo,halla dulqaato amniga qorsheyaal badan ayaa nooga dagsan”ayuu yiri Wasiir Islow.
Dhinaca kale Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka codsaday shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka dowladda, si looga hortago falalka liddiga ku ah nabad galyada.
Inta badan waddooyinka waa weyn ee Caasimadda ayaa xiran, waxaana ka jira wax loo yaqaano Kala Wareeg.
Ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa Booliska ayaa sidoo kale ku sugan koontaroollo gaar ah oo laga sugo amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Halkan ka daawo wararka oo muuqaal ah